Wedzera Pinterest Pinit Bhatani kuWordPress | Martech Zone
Wedzera Pinterest Pinit Bhatani kuWordPress
Svondo, Kukadzi 5, 2012 Mugovera, Kukadzi 4, 2017 Douglas Karr
Pinterest iri padanho rekuwedzera mukuzivikanwa ... zvakanyanya zvekuti mamwe masayiti ekugovana munharaunda ave kutanga kurasikirwa neimwe nzvimbo. Ini ndinotenda mukana wePinterest ndewekuti iri rinoonekwa svikiro rakarongedzwa zvakanaka kuti rigovane ruzivo. Nepo mamwe mawebhusaiti aine zvinyorwa zvinofinha, iyo mozaic inogadzirwa naPinterest iri nyore kupururudza nepakati kuti uwane chinotora chako mubereko.
Uine izvo mupfungwa, nzvimbo dzekugovana munharaunda ndidzo dzinonakidza traffic jenareta, saka wadii kuita kuti zvive nyore kugovana zvirimo zvako? Nhasi, tawedzera Pinterest Pinit bhatani kune yedu WordPress theme. Zvaive zviri nyore kuita… uye isu takatobatanidza kudhonza yakaratidzwa thumbnail bhatani seye URL yemufananidzo.
Kana iwe uchida iyo Yakaratidzwa Mufananidzo kuratidza, heino tema kodhi yekuwedzera bhatani rePiniti kune yako tema mukati meLoop:
Kana iwe usiri kuda kudoma iwo mufananidzo, iyi imwe nzira kodhi:
Zvakare - ive shuwa yekuwedzera iyo Pinterest script kune yako footer.php
Kuti uwane rumwe ruzivo rwekugadzira bhatani rePinit kana kutarisa mamwe maapplication uye maficha, tarisa iyo Pinterest zvinhu peji. Ivo vanhu veBuffer vakatsanangurawo Maitiro Ekuwedzera Iyo Pinterest Pinha Iyo Bhatani KuBlog Rako Uye Rega Vanhu Vapanike Maposti Nemifananidzo uchishandisa yazvino vhezheni yeDigg Digg plugin.
Tags: pinitbhatani bhatanipinterest bhataniWordPress
Awa Zuva reSocial Media…
Nzira gumi dzekuwedzera Kutengesa muna 10
Iwe uri kutema. Ini ndinogona kunge ndakakora asi ndiyo yekutanga bhatani rekuti "Pin it" randakaona.
Feb 7, 2012 at 11:20 PM
Shiri yekutanga inowana traffic!
Apr 11, 2012 pa 11: 05 AM
nvmnd ndakazviita. Izvo hazvishande kana iwe usina chaiyo "yakatarwa mufananidzo" yakatarwa kune ako mapositi.
Apr 11, 2012 pa 6: 55 PM
@ twitter-129525014: disqus, haifanire kunge iine chekuita neiyo Inoratidzwa Mufananidzo, asi IINODA imwe mhando yemufananidzo papeji.
May 21, 2012 pa 10: 09 AM
ID), 'thumbnail'); echo $ chigunwe ['0']; ?>
Ndine chikwereti kwauri murwi wese wekutenda neichi chidiki dombo, changamire.
Yakanditendera kuti ndigadzire iyo ShareThis kodhi yekushandisa pane wordpress (ShareThis yakanaka asi ine chokwadi inoda yakawanda yekubata isati yabatsira).
Kana chero munhu akaitika pane izvi mune imwechete mamiriro seni:
<span class = 'st_pinterest_hcount' displayText = 'Pinterest' st_img = 'ID),' thumbnail '); echo $ chigunwe ['0 ′]; ?> & tsananguro = '>
Wedzera chero mamwe mabheti aunoda sa st_title st_url st_blahblahblah
Ndinovimba chirevo ichi hachiparadzaniswe…
edit: goddammit inozotsemurwa, izvo zvakanaka daft. Wakawedzera mashoma nzvimbo uye mabiti kuitira kuti iratidze.
May 21, 2012 pa 10: 18 AM
Hei chaizvo ini ndichangowana, 1 miniti gare gare, kuti iwe unogona kuzviita nenzira iyi:
(mukati memusoro mateki)
<meta property = "og: image" content = "ID), 'thumbnail'); echo $ thumb ['0'];?>" />
pinterest ipapo inodhonza iyo mufananidzo kubva kune ino 'opengraph' malarkey. Spiffy!
May 21, 2012 pa 10: 49 AM
@fkypie: disqus Izvo zvakanaka kuti ivo vari kushandisa iyo Opengraph dhata! Kutenda nekugovana.
May 21, 2012 pa 10: 51 AM
Kupfuura kugamuchirwa. Ndinofanira kunge ndashandisa chikamu chakanakisa chemaawa maviri kuyedza kugadzirisa izvi… saka ndinovimba pamwe ndinogona kubatsira mumwe munhu kuchengetedza imwe nguva!
Jun 3, 2012 pa 6: 02 PM
Uhm, haugone kuwana iyo bhaluni. Ini ndatevera mazano ako nhanho nhanho, zvese zvinoshanda kunze kwebhaluni yebara. Chero zano rekuti ungagadzirisa sei izvi?
Jun 3, 2012 pa 6: 20 PM
@ twitter-61936398: disqus Unofanirwa kunge uine kuverenga-dhizaini = "yakatwasuka" kuti kaunda iratidzike kurudyi. Kana iwe uine izvo chaizvo uye uine marongero acho akafanira, iwe ungangofanira kumirira pinterest kuti unyatso gadziridza kuverenga. Handitende kuti vanoratidzira kana iri zero.
Jun 4, 2012 pa3: 01AM
Hi Douglas, wakanyatsotaura chokwadi !!! 🙂 Kana iwe usina mapini uye saka pakaunda iri pa zero, haizoratidze padivi pe "Pini iyo" bhatani. Ndakaisa pini yekuyedza kuti itarise, uye pakaunda pakagadziridzwa kuita “1” yakaonekwa padivi pebhatani rayo. Ndatenda neruzivo rwako! 🙂
Zvichida chimiro ichi chinofanirwa kurondedzerwa chaimo muchinyorwa.
Jun 4, 2012 pa7: 41AM
Zvakanaka, tinotarisira kuti vanhu vachaona chirevo chako! 🙂
Jun 21, 2012 pa7: 36AM
Chiitiko changu nepinterest:
Ini ndashandisa pinterest kugadzirisa chinzvimbo chesaiti yangu uye mhedzisiro yacho yaive yakanaka, yakavandudza kubva peji 6 kusvika 4rd nzvimbo ye1st peji mukati memavhiki matatu.
Ndakaona kuti mutengesi anonzi "pinterest", iyo yakamisikidzwa pekutanga kana iwe uchitsvaga "pinterest" kuFiverr, yakaburitsa yakanakisa mhedzisiro pamawebhusaiti angu. Mutengesi anobata saiti yangu nevanhu makumi manomwe nevasere, ndisingazive kuti akazviita sei izvi, asi zvave kuvandudza chinzvimbo changu cheSERP. Ndakaedza vashoma vatengesi vanopa pinterest gigs paFiverr asi havagone kusimudzira chinzvimbo chesaiti yangu. Handizive kuti sei.
Mushure mekushandisa pinterest yeSEO kwenguva yakati rebei, ini ndaona zvimwe zvakanaka zvacho:
- Google inoda chiratidzo chemagariro.
- Pini yega yega inoonekwa seyechitatu maratidziro anobuda.
- Zvinongedzo nemifananidzo kubva pinterest zvakateedzana
- Rangarira kubaya zvinongedzo zvepini kuti uwane indexed neGoogle.
Zvita 15, 2015 na9: 41 PM
Sezvo blogger ini ndiri kushandisa pinterest kugadzirisa chinzvimbo chesaiti yangu uye mhedzisiro yacho yaive yakanaka, yakavandudza mapeji angu. Ndatenda neichi chinyorwa chinodzidzisa! 🙂